Dab-damis aan-Dame: Boqorka reer Ivorian wuxuu doonayaa inuu ka qaybqaato dib-u-dhiska - TELES RELAY
ACCUEIL » International Dab-demiska: Notre-Dame: Boqorka reer Ivorian wuxuu doonayaa inuu ka qaybgalo dib-u-dhiska
The King of Krindjabo, ee caasimadda boqortooyada Sanwi ee koonfur ee Ivory Coast, ka dhigi doonaa deeq loogu talagalay dib u dhiska ah ee Notre Dame de Paris, kaas oo la baabtiisay ee 1700 sano, Louis Aniaba , Boqortooyada boqortooyada.
"Waxaan wadatashi buuxda la yeeshay maqaaladayda, waxaanu ku deeqaynaa deeq ah dib-u-dhiska dhismahan," ayuu yiriAFP King Amon N'Douffou V.
"The images (dabka) ayaa hurddada iyo anigu ma habeenkii qarashgareyn karaan, maxaa yeelay, cathedral this waa link xooggan oo u dhexeeya boqortooyadayda (ku Sanwi, Maxmiyadii Faransiis ah tan iyo July 1843) iyo France" waxay tilmaameen madax-banaanida Boqortooyada Akan - koox qowmiyadeed oo ka soo jeeda Côte d'Ivoire ilaa Togo.
Sanadihii sanadka 15, amiira Aniaba, oo asal ahaan maxali ah, ayaa la geeyay Faransiiska ee 1687 by geeska Amon sida ballanqaad ah oo ku kalsoonaanta Louis XIV. Waxa la baabtiisay by Bossuet oo qaatay magaca magiciisa caanka ah: Louis. Waxa uu noqday Louis Aniaba, ka hor inta aan loo magacaabin sarkaal Royal Reaction, isagoo darajo u ah kabtanka.
Louis XIV kala ah "Order of the Star of Our Lady" oo 12 1701 ka February, in uu helay insignia uu si Dame Notre hortiisa Ivory Coast laabtay.
Liibiya: Guud ahaan Diblomaasiyadeedka Guud ee Haftar